mjiadmin | Myanmar Journalism Institute
All posts by mjiadmin
August 1, 2014 အဖွင့်စာမျက်နှာmjiadmin
Myanmar Journalism Institute (MJI) မြန်မာ့သတင်းပညာသိပ္ပံ၏ အချိန်ပိုင်း မာလ်တီမီဒီယာ သတင်းပညာ (Journalism) ဒီပလိုမာသင်တန်းအား လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး မန္တလေးမြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သင်တန်းတက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းသူ ၊ သင်တန်းသားများ သင်တန်းလျှောက်လွှာ ပေးပို့ပေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
သင်တန်းကာလကို ၁၂ လ သတ်မှတ်ထားပြီး သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သူသည် အနည်းဆုံး လုပ်သက် အတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိကာ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေသော သတင်းစာဆရာများ ဖြစ်ရပါမည်။ လစဉ် မျက်နှာစုံညီ လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲ (workshop) များပြုလုပ်၍၊ e-learning (အီလက်ထရောနစ် အထောက်အကူပြု သင်ကြားရေး) အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကာသင်ကြားပါမည်။
သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ပထမ အပတ်စဉ် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသား ၁၅ ယောက်စလုံး အတွက် scholarship ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည့် အစီအစဉ်ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမ သင်ခန်းစာကို သြဂုတ် ၁၈ ရက်နေ့မှ သြဂုတ် ၂၃ ရက်နေ့အထိ ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပြီး မီဒီယာဥပဒေနှင့် ကျင့်ဝတ်၊ သတင်းရေးသားခြင်းတို့အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားဆရာတစ်ဦး၊ မြန်မာသင်တန်းဆရာများနှင့် အထူးဖိတ်ကြားထားသောပညာရှင်များက သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာစကားကိုအသုံးပြု၍ သင်ကြားပါမည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာတင်ရမည့်နောက်ဆုံးရက်မှာ သြဂုတ် ၈ ရက်၊ ၂၀၁၄ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် အရွေးချယ်ခံမည့်သူများအား အင်တာဗျူးမည့်ရက်မှာ စနေနေ့ သြဂုတ် ၉ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာများကိုinfo@mjimyanmar.orgသို့အီးမေးလ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးမြို့ နေသူများအတွက် လူကိုယ်တိုင် အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်သို့လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
(၁) ပြင်သစ်စင်တာ၊ YMCA၊ လမ်း (၈၀)၊ (၂၄) လမ်းနှင့် (၂၅) လမ်းအကြား၊ မန္တလေးမြို့ ။ တယ်လီဖုန်း -၀၂၂၃၁၃၈
(၂) ကိုကျော်သူရမျိုး-မိုဘိုင်းဖုန်းအမှတ် ၀၉၂ ၅၆၀ ၃၂၄၃၆
ထပ်မံသိလိုသည်များကို Ma Lina (ခ) ဒေါ်စိန်စိန်မြင့် ဖုန်း -၀၉၂ ၅၄၃၈ ၄၆၆၀ သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာများကိုအောက်ပါလင့် တွင် download ဆွဲယူနိုင်ပါသည်။
Mandalay Training Application Form (in Myanmar)
The first batch, registered and ready to go…
July 17, 2014 အဖွင့်စာမျက်နှာmjiadmin
May 5, 2014 Home, Press Releasemjiadmin
Myanmar Journalism Institute (MJI) is established;
(Temporary) Board of Directors elected
Date: Yangon; May 4, 2014
The meeting of founding members of Myanmar Journalism Institute (MJI) was held and elected 9-members (Temporary) Board of Directors at the Central Cooperative Society building at the junction of Saya San Road and University Avenue Road in Yangon on 4th May 2014.
The Temporary Board of Directors of MJI is elected by the founding assembly today from among the participating 39 representatives (from founding member media organizations). One representative of print media, one representative of private broadcast media, one representative of community media, one representative of ethnic media, one representative of online media, one representative of female mediaperson and two representatives of media associations were elected as the Board Directors. U Thiha Saw (Myanmar Journalists Association (MJA) was elected as the chairman and U SoeMyint (Mizzima Media) was elected as the vice-chairman of the Temporary Board of Directors.
The Temporary Board of Directors will work to officially register the Myanmar Journalism Institute (MJI), to design and approve the curriculums and to begin to operate the MJI.
The Temporary Board of Directors of MJI
U Thiha Saw (Myanmar Journalists Association), Chairman
U Soe Myint (Mizzima Media), Vice Chairman
U Ye Min Oo (MNTV), Member
U Kyaw Kyaw Lin (The Bago Voice), Member
U Khaing Myat Kyaw (Narinjara), Member
U Kyaw Khaing Oo (Planet.com.mm), Member
Daw Shwe Mhone (Union Journal), Member
U Myint Kyaw (Myanmar Journalists Network), Member
U Thiha Saw
Phone: 09 73183179